Filtrer les éléments par date : jeudi, 16 janvier 2020
jeudi, 16 janvier 2020 21:14
Mitady cerveaux: Hevitra tena tsara, fa mila mazava
Anisan'ny teniko hatrany ny hoe Vitatsika io, izany hoe ny fiarahan'ny rehetra mifandrimbona amin'ny fampandrosoana ny firenena no antoka ahatafavoaka antsika aingana.
Ny ahy aza dia atao recensement général mihitsy ny rehetra, inona no fahaizan'ny tsirairay, izay tsy manana asa rehetra dia tsy maintsy miditra manao Service National.
Ka nahavelom-boly ahy ny nahita ilay antso ho an'ny rehetra, indrindra ireo manam-pahaizana na ny mipetraka eto Madagasikara, na ireo any ivelany.
Somary taitra kely indray aho anefa rehefa nahita ny fahasamihafan'ny fampitam-baovao natao, raha vakiana tsara ilay antso, dia tsy nisy resaka politika tao anatiny, fa rehefa nihaino ny seraseran'ny présidence indray dia nisy hoe, izay mitovy hevitra amin'ny Filoham-pirenena, na izay mitovy hevitra amin'ny IEM no ilaina.
jeudi, 16 janvier 2020 21:11
Rosia: Nametram-pialana ny Praiministra Dmitri Medvedev sy ny governemantany
Taorian'ny fanambaran'i Vladimir Poutine, filoha rosianina, ny alarobia 15 janoary, ny fikasany hanavao ny Lalampanorenana rosianina, dia nametraka fialana ny Praiminisitra miaraka amin'ny governemantany.
Nisaotra ny praiminisitra ny filoha rosianina, ary voatendry avy hatrany ny ho solony, Mikhaïl Michoustine, lehiben'ny mpanangona hetra any Rosia. Neken'ny Parlemanta rosianina ny fanendrena azy.
Nambaran'i Vladimir Poutine, fa mila omena lanja kokoa ny Parlemanta, ohatra amin'ny fanendrena ny Praiminisitra, mila ampifandanjana ihany koa hoy izy ny fahefana mpanao lalàna, mpanatanteraka ary ny fitsarana, na dia hijanona manana lanja kokoa aza ny fitondran'ny filoham-pirenena.
Efa 20 taona moa no nitondra an'i Rosia ny filoha Vladimir Poutine, ka mitady ny fomba hipetrahana amin'ny manaraka izy raha ny fijerin'ireo mpandinika politika.
(Jereo Sary Tohina)
jeudi, 16 janvier 2020 16:45
Asa fanaovan-gazety: Mampiaka-peo ny Holafitry ny mpanao gazety
Namory mpanao gazety teny amin'ny Bon Accueil Ambatonakanga ny Holafitry ny mpanao gazety, izay manameloka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina, toy ny fandroahana sy fanoloana mpiasa teo anivon'ny ORTM, ny fanaovana fisavana tranon'ny mpanao gazety tao amin'ny televizionina IBC, ny fanaovana ramatahora mpanao gazety, ary ny fanaovana affectation ny sekretera jeneralin'ny Holafitry ny mpanao gazety.
jeudi, 16 janvier 2020 16:29
Betampona-Fenoarivo Atsinanana: Namoaka Ben’ny tanàna roa ny Tribonaly Administratifa
Kaominina iray manana Ben’ny tanàna roa. Izay ny fiantraikan’ny voka-pifidianana navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana Toamasina ny alarobia 8 janoary 2020 lasa teo, tao amin’ny Kaominina Betampona, Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo
Tamin’ny fotoam-pitsarana ampahibemaso, tao ami’ny Tribonaly Administratifa Toamasina, namoahana ny voka-pifidianana ofisialy dia Rakoto Justin, kandida « Indépendant Association Ravinala » no nambara fa voafidy ho Ben’ny tanànan’ity Kaominina Betampona, ary voarakitra amin'ity didy eto ity.
Ny petadrindrina eo amin’ny Tribonaly Administratifa Toamasina indray anefa milaza fa ny kandida « indépendant » Bezaka Serge Joseph no Ben’ny tanàna.
Vaka ny sain’ny vahoaka ao Betampona manoloana ny zava-mitranga, ary mametra-panontaniana hoe iza marina no tena Ben’ny tanàna voafidy tao amin’ity Kaominina ity.
jeudi, 16 janvier 2020 16:06
Fanafihan-dahalo: Omby 550 voaroba an-dalana teny Beravina, 7 lahy voatifitra tany Amboasary Sud
Mirongatra ny asan-dahalo. Omby miisa 550 avy any Belitsaka Maintirano hihazo an'i Tsiroanomandidy hamidy nosakanan’ny dahalo maro be mirongo basy mahery vaika tao Beravina-Morafenobe androany maraina. Tsy nisy ny maty sy naratra ny tompon'omby saingy lasan’ny dahalo avokoa ny omby ka miantso vonjy amin’ny fitondram-panjakana izy ireo hanavotana ireto omby ireto, sy hisamborana ireo dahalo.
Nitrangana fanafihan-dahalo ihany koa tany Ebelo Amboasary Sud ary nisy fifandonana teo amin’ny tompon’omby sy mpanaradia andaniny, ary ny dahalo ankilany. Naratra voatifitra ny enina tamin’ireo mpanaradia sy ny tompon’omby ; voa mafy ny iray niantefan’ny bala teo ambanin’ny fony. Tsaboina ao amin’ny hopitaliben’Ambovombe Androy ireo maratra amin’izao. Maty tao anaty fifanjevoana ny dahalo iray ary azo sambo-belona ny iray.
Naka zaza iray natao takalon’aina ireo dahalo, sady mitaky vola 3 tapitrisa Ariary, ka anaovan’ireo maratra antso avo amin’ny mpitondra hamonjy azy ireo fa tsy milamina ny tany.
jeudi, 16 janvier 2020 15:07
Rakotonirina Nantenaina: « Vonona ny tenako hanarina ity tanànan’i Toamasina mamintsika ity »
Tontosa androany alakamisy 16 janoary 2020 ny fifamindram-pahefana teo amin-dRazafimanana Christin, Filohan’ny delegasiona manokana sy Rakotonirina Nantenaina, Ben'ny tanàna voafidy teto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina.
« Vonona ny tenako hanarina ity tanàna mamintsika ity, ary miantso fiaraha-miasa amintsika rehetra rehetra ny fanarenana an’ity Toamasina ity », hoy ny Ben'ny tanàna vaovao raha nandray fitenenana sady nisaotra ny Vahoakan'i Toamasina nametraka fitokisana taminy.
jeudi, 16 janvier 2020 14:27
Lapan’ny tanàna Analakely: Tsy azon’ny mpanao gazety natrehina ny famindram-pahefana
Tontosa androany alakamisy 16 janoary maraina ny famindram-pahefana teo amin’ny Ben’ny tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana sy ny Ben’ny tanàna vaovao Naina Andriantsitohaina, teo ambany fiahian’ny Prefen’Antananarivo, jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Nosakanana tsy afaka nanatrika ny famindram-pahefana ny mpanao gazety, eny fa na mpaka sary aza. Ny mpiara-dia tamin’ny Ben’ny tanàna vaovao, Naina Andriantsitohaina no afaka naka sary. Ny Ben’ny tanàna vaovao ihany koa no nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety rehefa nivoaka ny efitrano taorian’ny fifamindram-pahefana ka nilazany fa « tao anatin’ny filaminana sy fifanajana no nanatanterahana izany. Anio tolakandro ny fotoana hametrahana ny samboady dia afaka miasa avy hatrany isika ».
jeudi, 16 janvier 2020 12:49
Inde: Gâteau 6.5km lava indrindra eran-tany
Montsana ny amboaran'i Sinoa ny taona 2018, nanao mofomamy 3.2km tany Zixi.
Ny alarobia 15 janoary, dia mpanao gâteau 1500, tany Kerala Inde no nanao mofomamy vanila mirefy 6.5km izay milanja 27 000kg nandritra ny 4ora.
Siramamy sy lafarinina 12 000kg no lany tamin'izany.
Izao no natao, hoy ireto mpanao gâteau ireto, anehoana eo anatrehan'izao tontolo izao, ny fahaizamanao ananan'izy ireo, satria dia madio sy tsara tokoa ny mofomamy vanila namboarin'izy ireo.
jeudi, 16 janvier 2020 10:59
Antsohihy: Nisy nanafika ny Ben'ny Tanànan'i Andrimbavontsona, RABEZATO Julio
Raha andeha hamonjy ny fivoriana mikasika ny famindram-pahefana ny Ben'ny tanànan'i kaominina ambanivohitra Andrimbavontsona, Distrika Analalava, ny Ben'ny Tanàna voafidy RABEZATO Julio, sy ny lefiny Gilbert, voafidy tamin'ny anaran'ny MAMITA, dia nandry tamin'ny hotely teto Antsohihy.
Ny alina anefa dia nisy 03 lahy niditra an-keriny tao amin'ny hotely, ka nandratra ny mpiandry ny toerana, ary niditra tao amin'ny efitra nandrian'ny Ben'ny tanàna sy ny lefiny.
Nitondra antsy sy hazo izy ireo, ka dia niezaka ny namono sy nikendry ny lohan'ireto olom-boafidy ireto. Raikitra ny sakoroka, lavo izy miarahalahy satria tratra tamin'ny lohany.
Mody naka entana kely ireto mpanafika ireto, asa anakonana ny tena anton'izao fanafihana izao.
Tsaboana eny amin'ny hopitaly eto Antsohihy izy telo lahy ireto.
jeudi, 16 janvier 2020 10:31
Fantatrao ve: Fanabeazana aizana
Ahoana ny fiforonan'ny zaza?
Raha tsy mbola te hiteraka dia inona no fepetra atao?
Inona no atao raha tiana ho ferana ny zaza na ny andrindrana azy arakaraky ny filàna na ny fahafahana manalehibe azy ?